Dr. Ahmed Hussein Isse iyo Minnesota
Gudoomiyaha Arrimaha dibedda ee Ururka Kulmiye/Somaliland oo booqasho ku imanaya Minnesota
Waxa jaaliyadda reer Somaliland ee degen gobolkan Minnesota ay si weyn iskugu diyaarinaysaa socdaalka uu maalinta Jimacaha ee bishan June ay tahay 29ka ku imanayo gudoomiyaha arrimaha dibadda ee xisbiga weyn ee Kulmiye/Somaliland, Dr. Axmed Huseen Ciise. Dr. Axmed oo ka mid ah musharixiinta u tartamaya jagada Madaxweyne ku xigeenka ee Somaland, gaar ahaan dhinaca xisbiga kumiye ayaa ka mid ah dadka sida gaarka ah uga qayb qaatay mashaariicda ugu badan ee horumarineed ee laga fuliyay Somaliland. Waa uu Dr. Axmed si gaar ah gacansaar ula leeyahay dalkan Maraykanka oo uu ku qaatay waxbarashadiisa heerka Jaamacadeed, isla markaana uu sito sinjiyada dalkan Maraykanka. Dr. Axmed Xuseen Ciise waxa uu ka mid yahay amaba uu hormuud ka yahay dadka tirada yar ee waaxda Arrimaha Dibadda (US State Dept) . wax ka weydiiso arrimaha Somaliland.
Haddaba Dr. Axmed oo socdaal ku soo maridoona Washington, DC iyo New York, si gaar ahna ula kulmidoona madaxda hey'adda State Department-ka ee dalkan Maraykanka maalinta Khamiista ah, ayaa si gaar ah looga wada sugayaa magaaladda Minneapolis ee gobolka Minnesota. Waxa la filayaa in uu shirar albaabadu u xiran yihiin la yeelan doono kooxo kala duwan oo ka kala socda waaxyaha Somaliland. Kooxaha ilaa hadda la hubo in uu si gaar ah ula kulmidoono waxaa ka mid ah:
1- Xubnaha iyo taageerayaasha ururka Kulmiye ee gobolkan Minnesota
2- Madaxda Somaliland Community of Minnesota
3- Odayaasha beelo dhaqameedyada iyo aqoonyahanada Somaliland
Waxa kale oo uu qabandoonaa shir weyn oo u furan dhamaanba dadweynaha reer Somaliland, yar iyo weynba.
Haddaba waxa si weyn laguugu soo dhaweynayaa in aad ka soo qayb gasho shirkan albaabada furan
Goobta: DAALO BANQUETTE
Goorta: SABTI, JUNE 30TH 2007
Saacadda: 3:00 PM -5:00 PM
Wixii su'aalo ah waxa aad kala soo xiriiri kartaa dadka isku soo duba riday barnaamijkan oo ay u horeeyaan:
Yuusuf Budle (Gudoomiyaha xisbiga Kulmiye ee Minnesota): Tell. 612-272-8118
Xasan Yoonis (Gudoomiyaha S/land Community): Tell. 612-618-2969
Diyaariye: Khadar Jaambiir (Khadar Jacayl)
La xiriir: eawch@aol.com
Dabaaldega Sanadguuraddii 47 ee Somaliland Protectorate iyo South Africa
Johannesburg, Xaflad si-heersare ah loosoo agaasimey oo loogudabaaldagayo Sanadguuradii Todobo iyo Afartanaad (47th) ee SLand Protectorate ey kaxorowdey mustacmaradii Ingiriiska 1960s ayaa kadhacdey Magaaloweynta Johannesburg. Xafladan oo ey sooqabanqaabisey Ururka Dhalinyaradda R.Somaliland ee K/Africa (SYFSA) & Jaaliyadda R.Somaliland ee Koonfurta Africa (COSSA), ayaa ey kasooqeybgaleen dad tirobadan oo isugujira Jaaliyadda R.Sland ee K/Africa, Soomaali, South African, iyo ajaanibkalle.
Xafladda oo sihabasami ah udhacdey, waxaa khudbado taariikhi ah kajeediyey goobtaasi uguhoreyntii Dr./Sheekh Cali Axmed Xassan oo ugawaramey silsilada taariikheed ee 26 June iyo israacii lagu-khasaarey ee Sland & Somaliya. Waxaa xafladaasi isna kahadley xoghayaha guud ee Jaaliyadda, Mudane S.Mohamed oo taariikhda, waxqabadka iyo ididiilooyinka jaaliyadda soobandhigey, mar uu Mudane Mohamed kahadlayey ididiilooyinka Jaaliyadda R.Sland ee mustaqbalka dhow wuxuu sheegey in Jaaliyadda R.Sland ee K/Africa ey hormood kanoqondoonto (insha allah), xal uraadinta dadka soomaaliyeed ee maalinkasta lagudilayo K/Africa. Waxaa isla goobtaasi hadalo muhiim ah kajeediyey, Mudane Ooble, Mudane Jaamac Qoorgaab, Mudane Dr.Mustafe A/Rahman, Eng. A/rahman oo dhamaantoodba katirsan Jaaliyadda R.Sland iyo ururka dhalinyaradda R.Sland ee K/Africa.
Waxaa isna goobtaasi kahadley Afhayeenka dhalinyaradda Soomaaliyeed ee K/Africa, Mudane Mohamoud Ganey, oo kahadley horumaradda Sland ey kutalaabsatey in ey kudayasho mudantahey.
Mudane Axmed Faarax Wiiwaa oo ah sarkaal kamid ah xafiiska horumarinta qaramadda midoobey ee K/Africa (UNDP) ayaa isna dhiirigelin & muhimadda ey leedahey jaaliyaddu soobandhigey.
Waxaa goobtaasi shahaado sharaf lagu gudoonsiiyey mudanayaal katirsan jaaliyadda r.sland ee K/Africa. Madaalo isugujira, Gabayo, Heeso iyo ciyaaro ayaa halkasi iyana kadhacey.
Ururka dhalinyaradda ee R.Sland & Jaaliyadda R.Sland ee K/Africa waxey mahadnaq u dirayaan dhamaan dadkii kaqeybqaatey in ey xafladani sidaa fiican u qabsoonto.
Guul & Gobanimo Somaliland